एमाले सांसदमाथि शिक्षिका बलात्कारको आरोप, नेपालगञ्जको अप्सरा होटलमा २ पटक बलात्कार ! | Diyopost - ओझेलको खबर एमाले सांसदमाथि शिक्षिका बलात्कारको आरोप, नेपालगञ्जको अप्सरा होटलमा २ पटक बलात्कार ! | Diyopost - ओझेलको खबर
एमाले सांसदमाथि शिक्षिका बलात्कारको आरोप, नेपालगञ्जको अप्सरा होटलमा २ पटक बलात्कार !
दियो पोस्ट मंगलबार, माघ २५, २०७८ | १२:५६:०६
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै सांसद मोहन बानिया
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता, पूर्व मन्त्री तथा सांसद मोहन बानियाँमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । एमालेका समानुपातिक सांसद रहेका बानियाँविरुद्ध जुम्लाकी एक शिक्षिकाले बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन् । शाही थरकी शिक्षिकाले नेपालगञ्जको अप्सरा होटलमा बानियाँले आफूलाई दुई पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा सोमबार जाहेरी दिएकी छिन् । जाहेरीमा माघ १९ गते राती होटलमा बसेका बेलामा बानियाँले बलात्कार गरेको आरोप छ । आज प्रकाशित नेपाल समाचार पत्रले यो खबर प्रकाशन गरेको छ ।
शिक्षिका शाही शुक्रबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा पुगेकी थिइन् । एकछिनपछि जाहेरी लिएर आउँछु भनेर निस्किएकी शाही त्यसपछि गएकी थिइनन् । आइतबार प्रहरी अधिकारीलाई फोन गरेर जाहेरी लिएर आउँदैछु भनेकी शाही सोमबार जाहेरी लिएर जिप्रका पुगेकी हुन् । शाहीको जाहेरी दर्ता भइसकेको छैन । प्रहरीले घटनाका बारेमा अनुसन्धान थालेको छ ।
बाँके प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मधुसुदन न्यौपानेले सांसद बानियाँविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेको पुष्टि गर्दै भन्नुभयो–‘सांसद बानियाँविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेको छ । हामी बुझ्दैछौं, मंगलबार यस बारेमा अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
सांसद बानियाँ र ती शिक्षिकाका बीचमा लेनदेनको विषय पनि रहेको बुझिएको छ । बानियाँले २५ लाखको चेक दिए पनि पछि खोसेर लगेको उनले बताएकी छन् । त्यो रात दुई पटक कण्डम लगाएर बलात्कार गरेको उनको दावी छ । महिलाको स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट आउन बाँकीे छ । ‘दुई पटक बलात्कार, त्यो पनि कण्डम लगाएर’ भन्दा प्रहरी अधिकारी पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।
महिलाले बताए अनुसार, आफू माओवादी केन्द्र समर्थित शिक्षक संगठनको नेतृ रहेको र काठमाडौंमा आफूले गरेको भाषणबाट बानियाँ प्रभावित भएपछि चिनजान भएको थियो । सांसद बानियाँलाई फोन सम्पर्क गर्दा ‘कल फरवार्ड’ गरिएकाले सम्पर्क हुन सकेन । प्रहरी अधिकृतसँग दिउँसो सम्पर्कमा आएका बानियाँले ‘महिलाले नभएको कुरा’ गरेको बताएको बुझिएको छ ।
मंगलबार, माघ २५, २०७८ | १२:५६:०६